Nei Ndichishandira Mahara uye Wil Wheaton Zvingave Zvisirizvo | Martech Zone
Nei Ndichishanda Mahara uye Wil Wheaton Angave Asina Chokwadi
Mugovera, October 31, 2015 Chipiri, Mbudzi 3, 2015 Douglas Karr
Iyi posvo haisi yekukakavara, uye ini handisi kuyedza kutanga nharo naWil Wheaton uye posvo yake, haugone kubhadhara rendi nepuratifomu yakasarudzika uye kusvika kune yedu saiti inopa. Wil Wheaton chiratidzo chakamisikidzwa chine zvinotevera zvinotevera. Akashanda nesimba kusimudzira vateereri vake pamwe nenharaunda - ndosaka kuchema uye kubvumirana nemaonero ake.
Wil Wheaton aive nehunhu mukupindura kwake. Aive zvakare akangwara kuzviita pachena… achitora huipi, hunyanzvi hwekudyidzana mazuva ano hasha dzese. Asi vazhinji vedu hatisi Wil Wheaton. Vazhinji vedu tiri kuyedza kukura kusvika kwedu uye vateereri uye tichida kuisa mari mukuita izvozvo. Mikana yekusvika kune vateereri saHuffPo yave iri, saizvozvo, yekudyara. Panzvimbo pekubhadhara kushambadzira, mutengo ndewokupa mamwe matarenda ako.
Ngatitangei takurukura nezvayo mammoth, capitalist chikara chinonzi Huffington Post. Martech Zone inoenderera mberi iine kuwanda kwemaviri manhamba kukura gore gore. Mushure memakore gumi online, iyo blog inoenderera ichikwezva vatengi vakakura kune yedu agency, Highbridge. Kunanga kwekukura kwemari kwakanaka, asi Jenn (wandinoshanda naye mubhizinesi) uye tinoziva kuti tinofanira kuramba tichiisa mari mubhurogu kuti tipe mari yemari inogona kutungamira mukubatsira kuburitsa.
Kana chinyorwa chikawana purofiti yakakosha (kusasanganisa iro rebasa), vanhu vanogona kupindura nenzira imwechete kwatiri maererano nevanyori vevaeni uye nekuisa zvirimo. Isu tinoburitsa zvakatumirwa zvishoma svondo rega rega kubva kune vashanyi patinotenda kuti vateereri vedu vachabatsirwa nezviri mukati. Isu hatiripe makambani kana vanhu vamwe, zvimwe.
Hatiripe vanyori vevaenzi (zvakadaro) nekuti takaisa mari pamusoro pegumi mukukudza vateereri vedu. Ini ndinodyara inokwana kota yenguva yangu vhiki rega rega munzvimbo dzekuverenga, kutaurirana nemakambani, kuongorora mapuratifomu, kuita podcast, kuwedzera purogiramu yedu yevhidhiyo, kuverenga mabhuku, kuenda kuzviitiko uye kubhadhara mapuratifomu anotsigira kutsikisa kwedu. Ndiri kutya kufunga nezvekukosha kwenguva iyoyo… ndinoikoshesa mumamirioni. Ini handina kukwanisa kubhadhara rendi nemari iyoyo, chero!
Ko Wil Wheaton akakwanisa kubhadhara rendi neyavo bhurogu nezve Huffington Post? Handitendi kudaro.
Vateereri vedu vane kukosha. Isu takabhadhara iko kusvika muzviuru zvemaawa uye zviuru zvemadhora mune yakananga kudyara nekusimudzira. Kubhadhara kune vedu vanyori vanyori kunouya mumukana wekuvaka masimba avo nevateereri vedu uye kuvakwezva kuti vabatanidzane navo nekuda kwezvikonzero zvebhizinesi. Makambani akaisa mari mukunyora zvirimo zvikuru nesu akaziva kunanga mari kubva kune iwo machira. Nekudaro, ini ndisati ndavabhadhara izvo zvemukati, vateereri vedu vane
Kune avo vedu vasina mukurumbira uye vari kuenderera mberi nekushanda nesimba kuti vawedzere masimba edu uye vasvike pamhepo, mukana wekuwana nekukwezva vateereri mumwe munhu anoenderera nekudyara mairi mukana wakanaka kwazvo. Handitendi kuti kubiridzira zvachose… iwo mukana unowirirana apo mikana yacho inogona kutauriranwa.
Icho chokwadi ndechekuti PR nyanzvi yakasvika kuna Wil Wheaton yakabhadharwa. Saka HuffPo arikushandisa mari kukumbira vane mukurumbira saiye. Ndinotenda Mr. Wheaton anogona kunge akakwanisa kutaurirana chibvumirano chaangave akabatsirwa - zvese zvakananga uye zvisina kunangana. Hedzino nzira shoma:
Kukurudzira Bhuku - Mr. Wheaton munyori anokwanisa. Zvichida aigona kunge akataurirana akasununguka kusimudzira bhuku rake kune vazhinji vateereri veHuffington Post. Zvinogona kunge zvakaitwa neakakodzera kufona-kune-chiito pane mamwe mapoka kana misoro, kana kutokumbira kuti Huffington Post iongorore mabhuku mukutengeserana. Izvo zvinogona kutungamira kune akati wandei ekutengesa mabhuku!
Kudanwa-Ku-Kuita - Mr. Wheaton anogona kunge akakwanisa kutaurirana kushevedzwa-mu-chiitiko mukati mehupenyu hwake hweHuffington Post iyo yakakurudzira vanhu kunyorera Mr. Wheaton pamikana yekutaura. Kutaura kune mari inobhadhara mari kune avo vane mukurumbira saVaW Wheaton.
HuffPo Zviitiko - Pamwe chete neHuffPost Live, Huffington Post inosimudzira uye inotsigira zviitiko zvinoverengeka zvematunhu nenyika. Zvichida Mr. Wheaton angadai akakurukura kugona kuve mutauriri wevanhu vanobhadharwa pazviitiko izvi - uye vakatove nebhuku kusaina nemumwe nemumwe.
Chinokosha ndechekuti ndinotenda Mr. Wheaton aigona kuve nyore kudzvanywa sangano rakafanana neHuffPo kutyaira kuzhinji kutarisirwa, vateereri, uye - pakupedzisira - mari kwaari. Uye iyo mari inobhadhara rendi!
Nei Ndichishanda mahara
Ini ndinonyora vakasununguka zvemukati pane yangu saiti, ini ndinonyora vakasununguka zvemukati zveimwe saiti kwandinoshuvira kuita muvateereri vavo, uye ndinotaura vakasununguka pazviitiko zvine tarisiro yandinoshuvira kuita nayo. Chokwadi ndinonyorawo rwakabhadharwa zvemukati zvevatengi vedu uye ini ndiri rwakabhadharwa kutaura pane zvimwe zviitiko. Dzimwe nguva, isu tinotobhadhara nzira yedu kuenda kuchiitiko chenyika kungozvivhara pane yedu bhuku. Mune mamwe mazwi, ini dzimwe nguva ndinobhadhara kungosvika kune vateereri pazviitiko izvozvo!
Mukana wega wega unoongororwa zvichienderana nekuti tinga batsirwe sei nekuratidzwa uye uye vatinogona kusangana navo ipapo. Yedu shandira mahara zano rave rinotibatsira zvakanyanya kwatiri. Iko kudhura kwechiitiko chimwe chakapedzeredzwa mukuzadzikisa kondirakiti isu tingadai tisina kumbowana neimwe nzira neyemhando yenyika. Iyo mhando yakatungamira kune mamwe mabhureki. Uye zvichingodaro.
Nekudaro, ini ndinogona kunge ndakabhadharwa mazana mashoma emadhora pane blog blog. Kana, ini ndaigona kuvhara rimwe bhizinesi nevateereri uye kukohwa makumi ezviuru kana kunyangwe mazana ezviuru zvemadhora muzvibvumirano. Iye zvino unoziva nei ndichishandira vakasununguka.
Muchokwadi, handingoshandire mahara chete - Ini ndinowanzo bhadhara kushanda mahara! Takabatana naDittoe PR, isu takaisa mari yakawanda mukutsvaga tarisiro, vateereri vanokodzera vatinoshuvira kusvika. Chikwata chine tarenda pa Dittoe PR ndinoisa tarenda rangu kune iwo mabhuku kuti ndipe mikana iyi. Isu tinoramba tichikohwa zvakanakira hukama ihwohwo - kuita basa kumakambani mune avo vateereri isu tingadai tisina kumbosangana neimwe nzira.
Uno nokusingaperi kubatsira vanhu vasingabhadharwe? Wakambotora marara ndokuakanda mumarara here? Wakambopa munhu asina pekugara nemari yekudya here? Sei iwe uchigona kudaro? Tinobhadhara vatungamiriri vedu vehurumende mari yakati rebei kuti migwagwa yedu igare yakachena uye kubatsira avo vasina rombo rakanaka. Tichiri kuzviita, zvakadaro, nekuti zvine tsitsi.
Ini handidi kugara munyika umo vanhu vasingaite chero chinhu kunze kwekunge vabhadharwa nezvayo. Saiye muridzi webhizinesi, ndinogona kukuvimbisa kuti ndingadai ndisina kuita bhizinesi dai ndiwo mafungiro andaitora. Ndine shamwari dzangu dzinoverengeka dzakapfupika seizvi, uye ipapo ndinonzwa kushushikana kwavo kuti bhizinesi ravo haritombokure. ndinotenda kubatsira vanhu kutanga yave iri nzira huru yekukudza bhizinesi rangu. Uye kana ndikabatsira mumwe munhu mahara, vanowanzoendesa bhizinesi rangu kune vatengi vanobhadhara zvikuru.
Ini handisi kubvunza tsika dzaVaW Wheaton, asi ndinopokana nepfungwa yekuti kambani inoita purofiti iri kushandisa mumwe munhu nekuvakumbira kuti vape tarenda ravo mukutengeserana. VaW Wheaton vari kushandisa chokwadi chekuti Huffington Post ine mari zvisinei nenjodzi huru nekudyara kwavakaita mukuvaka nharaunda yavo? Ivo vakabhadhara uye vanoramba vachibhadhara kubhadhara uye kusimudzira kwavo kutsikisa - nei izvo zvichiratidzwa?
Iyo Inotungamira Edhi
Ndiri kuverenga The Slight Edge izvozvi naJeff Olson uye fananidzo yake ndeye yemurimi. Dyara divi, ririme, uye wozokohwa zviripo. Murimi haapihwe mari yekudyara mbeu, anongopihwa chete kana mbeu iyoyo yanyatsorimwa zvoita zvibereko zvebasa rake. Ndinokurudzira munhu wese kudyara mbeu kwese kwazvinonzwisisika… uchabereka goho rakakura ukangoita!
Joinha isu paBlab
Kevin Mullett neni tichaenda kuzotaura nezvenyaya iyi China ichi pa Blab mune yedu inotevera Kushambadzira Cage Mechi! Ndinovimba unogona kutijoinha.
Tags: huffington postakabhadhara zvemukatizvisingabhadharwe zvemukatiwil wheaton
Iwe Unofanirwa Kuisa MuInternet Ongororo Kuongorora Kuti Urarame Mbiri Yako?
Maitiro Ekusanganisa Up Yako Yemukati Kushambadzira
Nov 2, 2015 na9:26 PM
Agreed. Zviri kumunyori kuti asarudze kana vachifunga kuti kufumurwa kunovatsiva nguva yavo uye kushanda nesimba. Izvo hazvina kufanana nevanyori vechidiki vanozvimirira vanokumbirwa kunyora mahara (kana pa6 cents / izwi, darn padyo nayo) pasina kuwana munyori chikwereti. (Uye ini ndinochengeta avo vanyori vanobhadharwa zvakanyanya!)
Pakupedzisira pane tradeoff yekukosha uye uko mutsara iwoyo uchachinja nekufamba kwenguva uye nekudhindwa. Kunyangwe pandakashanda semunyori anoshanda akazvimirira, ndakaona kuti paive nehutungamiriri: basa rinobhowa zvakanyanya & kushomeka kucherechedzwa kwaro, kukwirisa mubhadharo. Saka kunyora zvinyorwa zvehunyanzvi zvinogona kubhadhara zvakanaka. Kunyora ngano kunowanzo pedzisira kusisabhadhare chinhu asi kuchingogona kugutsa munyori.
Nov 3, 2015 na12:19 AM
Ndainge ndichiri kukakavadzana nemari iriyo kuyerwa kwevalue. Vechidiki vanozvimiririra vanoshanda pa6/cents izwi kana darn padyo naro vari kuvaka resume uye kukudza hunyanzvi hwavo. Iniwo handina kuita mari pandaiva nyanzvi yechidiki. Sezvaunoshanda pahunyanzvi hwako uye ukava nani, unowedzera kukosha. Ini ndaimboshanda kune rimwe bepanhau uko vagadziri vaibatwa zvakaipisisa uye vachipihwa mihoro inotyisa, asi mukana wakavadzidzisa kukwenenzvera hunyanzvi hwavo, hunyanzvi, uye mapuratifomu ekudzidza avasina kumbobvira vasangana nazvo muchikoro. Hunyanzvi ihwohwo hwakaita kuti vawedzere kukwikwidzana pabasa uye vakakwanisa kuwana mabasa aishamisa.
Kungoti hausi kubhadharwa nhasi hazvireve kuti hausi kuvaka kukosha uye uchabhadharwa kukosha ikoko gare gare.